स्वस्थानीः विभेदको सुरूवाती कथा | sociology/anthropology-nepal
By Sociology Nepal on April 1, 2013
माघ १३ गतेबाट धेरै महिला एक महिना लामो स्वस्थानी व्रत बसेका छन् । यसमा पढेलेखेका महिलाको संख्या पनि प्रशस्त छ । हिन्दु समाजमा जन्मेका महिलालाई थाहा नभएको र कसैले भनेको नयाँ व्रत र पूजा होइन, स्वस्थानीको । व्रत नबसेका घरहरूमा पनि स्वस्थानीको कथा वाचन गर्ने चलनले धेरैलाई यो कथा थाहा भएको हुन्छ । यो व्रतको नाम त स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत जुन नारी जातिको व्रतको नामले भनिन्छ, तर त्यसमा पूजा र व्रतचाहिं महादेव -शिव) को हुने गर्छ । यो वर्ष पनि साली नदीमा स्वस्थानीको व्रत बस्ने महिलाले स्वस्थानी नाम गरेकी कुनै देवीको फोटो वा मूर्तिको स्थापना गरेका छैनन् । त्यहाँ नदीको बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पूजा थालिएको छ । यो अचम्मलाग्दो कुरा छ, व्रत कसको भन्दा देवीको । पूजा गरिने मूर्ति र कथा कसको भन्दा महादेवको । ३१ अध्यायको कथामा स्वस्थानी भनेकी कस्ती देवी हुन् भन्ने विषयमा खासै केही लेखिएको छैन । तर महादेवको शक्तिको कथा बढो रोचक ढङ्गबाट लेखिएको छ । यो व्रतकथा लगभग महादेवको व्रत र कथा हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।
देवीको व्रत भनिए पनि त्यस पूजाको प्रसाद महिलालाई दिइँदैन । बरु खोलामा बगाइन्छ । कथामा भनिएको छ, ‘व्रत बस्नेका पति छन् भने पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मीत छोरालाई र मीत छोरा पनि नभए खोलामा बगाइदिनु भनिएको छ । कसो खोलामा पनि पुरुष माछाले मात्रै खानु भनिएको छैन । व्रत बस्ने वा कथा सुन्ने नारीहरूले पण्डितलाई प्रसाद छोरा नभए छोरीलाई दिँदा के हुन्छ ? वा किन नदिने भनेर प्रश्न गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।
देवीको भनेर गरिएको पूजामा किन पुरुष लिङ्गको पूजा हुन्छ भनेर हामीले हाम्रा धर्मशास्त्रका पण्डितहरूलाई अब पनि नसोधे कहिले सोध्ने ? स्वस्थानीको कथा भनेर महादेवको शक्तिको कथा बताइरहँदा र त्यस्ता किताब छापिइरहँदा के हामीभित्र प्रश्न उठ्दैनन् ? केही-केही विद्वानले शिवलिङ्गको पूजालाई प्रकृतिको निरन्तरताको पूजा भन्ने जवाफ दिन्छन् । के महिलाको योनिले प्रकृतिको निरन्तरतालाई साथ दिँदैन र ? लिङ्गको पूजा गर्नैपर्ने भए स्वस्थानीको पूजामा उनको योनिको पूजा गर्दा हुँदैन ? किन महादेवकै लिङ्गको पूजा गर्ने ? हाम्रो समाजमा अब यस्ता विषयमा कुरा गर्न जरुरी छैन र ? यस्ता प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ?
खासमा हामी नेपाली महिला हरेक विषयमा छलफल गर्न चाहँदैनौं । बोल्नै पनि चाहँदैनौं । बरु चुपचाप सहन चाहन्छौं । आफ्ना कुरा आफैले बिर्सन चाहन्छौं । किनकि हामी अबोला हौं । हामी जति नै आधुनिक भए पनि हाम्रो मानसिकता अबोला नै छ । हजुरआमाहरूको जस्तै । स्वस्थानीको कथा विभेदकारी छ भन्ने लगभग स्वस्थानी कथा सुन्ने सबैलाई थाहा छ । तर हामी बोल्न चाहन्नांै । जब हामी हरेक विभेदको विषयमा बोल्दैनौं । तब आफू विभेद परे पनि बोल्न सक्दैनौं । किनकि हाम्रो बोल्ने बानी नै छैन । हो, यहींबाट हुन्छ, हामीमाथि हिंसाको सुरुवात । हरेक घरमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएपछि पुरुष श्रेष्ठ हुन्छ । महिलाका परिवारले उसको खुट्टाको पानी खान्छन्, उसलाई ढोक्छन् र विष्णुको रूप भएको हुनाले भगवान सम्झेर पूजा गर्छन् । भन्न त महिलालाई पनि पुरुषको घरमा लक्ष्मीका नाम दिइन्छ । तर त्यहाँ उसलाई लक्ष्मीको व्यवहार गरिँदैन । बरु महिलाले पुरुषका घरका सबैलाई पूजा गर्नुपर्छ । मानौं कि पुरुष र उसको परिवार देवताको परिवार हो । अनि महिला र उसको परिवार मानिसको परिवार हो । यस्ता विषयमा हामी बोल्दैनौं । यो त्यही लिङ्गको पूजाको एक निरन्तरता हो । लिङ्गको पूजा अर्थात् शक्तिको पूजा । मानौं महिलाको त कुनै शक्ति नै हुँदैन । विवाहमा भन्ने गरिन्छ, पाले पुण्य मारे पाप । के महिला अरुले पालिदिनुपर्ने वा अरुले पाल्नुपर्ने अशक्त जाति हो ? ‘अकुपाई बालुवाटार’ आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू हाम्रो समाजमा रहेको धर्मको यो विभेदको विषयमा पनि कुरा गर्ने कि ? साली नदीको किनारमा स्वस्थानी मेला हेर्न जाने युवाहरूले यो त देवीको व्रत हैन र ? किन शिवलिङ्गको पूजा गर्नुभएको भनेर व्रतालुलाई प्रश्न सोध्ने कि ? कथा वाचन गरिरहेका बाहुनलाई तपाईले त महादेवको कथा पो भन्नुभयो, स्वस्थानी देवीकै कथा भन्नोस् न भनेर आग्रह गर्ने कि ?
(यो लेख कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भइसकेको छ ।)
(उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन् )